Intsingiselo yeetattoos zeentsiba | Ukuzoba
Intsingiselo yeeTattoo zeentsiba
Iintsiba ziyilo oluhlala lusetyenziselwa iitattoos. Ayisiyiyo kuphela ngenxa yobuhle bayo, kodwa ikwanokusebenziseka kwayo kunye nendlela elula enokutshintshwa ngayo kwiindawo ezahlukeneyo zomzimba ezifana nengalo, umva okanye imilenze. Nangona kunjalo, Kubalulekile ukuba uqwalasele ukuba iyintoni intsingiselo yolu phawu ngaphambi kokuba ulubhale kulusu lwakho, ke uya kwazi ukuba ngaba luluhlobo luni na kuwe okanye hayi.
Iitattoo zeentsiba zinokuba neentsingiselo ezininzi, kodwa ngaphandle kwamathandabuzo okokuqala kuya kuhlala kunxulunyaniswa nenkululeko. Iintsiba zezentaka kwaye zibonwa njengezilwanyana ezikhululekileyo kuba zinamandla okubhabha. Ukubona intaka evalelweyo iya kuhlala iyinto engaqhelekanga, kubantu abaninzi abazinikele ekuthengisweni kwayo. Umntu onetattoo yosiba olunye okanye nangaphezulu emzimbeni wakhe, unokuba ngumbulelo kwisigqibo sokuphila ngokukhululekileyo okanye umnqweno wokufuna inkululeko.
Iintsiba zinokuba nentsingiselo ekhethekileyo enento yokwenza nokunyuka okanye ukuvela komoya kwindawo ephezulu. Iintsiba zazisetyenziswa ziinkosi zoMthonyama zaseMelika ukufuzisela unxibelelwano lwabo nemimoya kwaye bavakalise ubulumko besibhakabhaka. Kananjalo kwinkcubeko ye-Indian Indian iintsiba zimele amandla oothixo, njengendudumo, umoya kunye nomoya.
Ngaphaya koko, iitatoo zeentsiba zikwavuselela umoya, njengoko iintsiba zifuna umoya ukuba uhambe ngokukhululekileyo.. Kungenxa yoko le nto zinxulumene nemibono, ubukrelekrele kunye nokukwazi ukunxibelelana nabanye ukuba sicinga ntoni.
Ukuba ungumntu osebenza kwicandelo lezonxibelelwano, i-tattoo yolunye okanye uninzi lweentsiba nayo iya kuba sisigqibo esihle.
1 Iindidi zeetattoos zeentsiba
1.1 Ukubhala usiba
1.2 Iintsiba ezincinci
1.3 Umbala wamanzi
1.5 Iintsiba zepikoko
1.6 Iintsiba ezingapheliyo
1.7 Intsiba eneentaka (ulwandle kunye neenkonjane)
1.8 Iintsiba kunye notolo
1.9 Ngeentsiba zaseIndiya
2 Uyifumana phi itattoo yeentsiba
Iindidi zeetattoos zeentsiba
Enye yeetattoos quintessential, ngaphakathi kweentsiba, kukubona ukuba enye yazo ibonakala ngathi ibhala njani. Ngamanye amaxesha sisibetho esilula, kodwa kwabanye sisishiya negama okanye ibinzana. Kuyinyani ukuba xa oku kusenzeka, kufuneka sikunike intsingiselo yala mazwi abonisa nathi. Kodwa kuhlala kunjalo mamela iimvakalelo zethu nomnqweno. Indlela yokukwazi ukunxibelelana nento ebesizivalele ngaphakathi kuyo.
Ubuqaqawuli kunye nokuncinci kungagxila kwiitattoos ezincinci zeentsiba. Kuba ngamanye amaxesha sifumana ubeko olulula, kodwa oko akuthethi ukuba lushiye ngasemva ngokweentsingiselo. Njengoko sisazi, kunokuba njalo bonakalisa inkululeko ngokuzibonakalisa eyedwa, okanye ubukrelekrele, kuba akukho nto siyifunayo ukuyinika elo xabiso.
Ngaphandle kwendlela echaziweyo, indlela indibaniselwano yombala Njengomsebenzi wobugcisa, uyabonakala xa sithetha ngetattoo yamanzi. Indlela yokubonisa incasa elungileyo kunye nokumakisha uphawu olukhulu kulusu. Nangona inokuhamba kunye nezinye iinkcukacha. Njengeentaka ezithile eziphuma kuyo, zikwabheja inkululeko kananjalo, ukunyusa umgangatho.
Kuyinyani ukuba kwezinye iimeko, sifumana i-taiiTatoo zeentsiba ezinemibala. Kodwa baphethe iintsiba zesilwanyana ekuthethwa ngaso, njengoko kusenzeka ngepikoko esiza kuyibona kamva, ehlala ibheja ngeethoni eziluhlaza kunye eziluhlaza. Intsiba ikwanokuphatha iithoni ozikhethileyo, nokuba azinanto yakwenza nentaka ekuthethwa ngayo. Ngaphandle kwamathandabuzo, ngazo uya kuyenza icace enye yeentsingiselo esizithanda kakhulu egxile kubuchule bokwenza izinto.
Iintsiba zepikoko zihlala zinxulunyaniswa neesimboli ezininzi. Ukusukela iGrisi yamandulo kwakucingwa ukuba kunokuthetha ukuchuma kunye nobungangamsha. Kodwa nakwezinye iindawo zehlabathi ezinje nge China, kukholelwa ukuba iyafana nobuhle obukhulu. Nangona ngokuqinisekileyo singekhe silibale ukuba luhlaziyo kwaye ikwakhona njengentsingiselo yomvambo onje.
La ubuhle obungunaphakade inkululeko ngonaphakade. Zingaba zimbini zeentsingiselo ezinkulu xa sidibanisa itattoo yeentsiba kwelinye icala kunye nophawu olungapheliyo kolunye. Zezimbini ezona zoyilo ziceliweyo kwaye ngamanye amaxesha ziyahlangana zenze eyona tattoo yokuqala. Ewe kunjalo, ukuba uyilo ekuthethwa ngalo lunegama okanye umhla, uphawu luya kulawulwa lulo.
Intsiba eneentaka (ulwandle kunye neenkonjane)
Mhlawumbi phakathi kwazo zonke ezi zoyilo sizikhankanyileyo kunye nemibono esabelana ngayo, uhlobo lwe tattoo iintsiba kunye neentaka ezinjengee-seagulls okanye i-swallows iya kuba yeyona nto ifunwa kakhulu. Kuqhelekile ukuyibona nge-inki emnyama, kodwa nangokubamba ngombala. Apho usiba lukhangeleka ngathi luyanyamalala kwinxalenye yalo ephezulu kwaye ezi ntaka ziyaphuma kulo. Ewe, kule meko sithetha ngokuthatha inqwelomoya ngohlobo lokunyusa ebomini bethu. Ukutshintsha indlela esibona ngayo izinto zibe ngcono kwaye zibe nethemba. Ngokufanayo, ikwabonisa inkululeko yomntu kunye nokomoya.
Iintsiba kunye notolo
La ukuzikhusela Yinto esisiseko kwaye inokubonakaliswa kumvambo onje. Iintsiba kunye notolo ziyahlangana ukuze zisinike uyilo olusisiseko nolugqibeleleyo. Nangona baninzi abantu abanyanzelisa ukuba inokuba lukhuseleko kwabanye ababangqongileyo.
Iintsiba zaseIndiya zithathwa njengezinto zokhuselo. Into esiyaziyo sonke njengekhubalo. Into ebisoloko isetyenziswa njengesiko kubantu bemveli. Kwiminyaka emininzi eyadlulayo, bubungakanani baloo ntsiba buchazayo ubukroti begorha ngubani ozinxibileyo. Ke ikratshi kunye nesibindi zezinye zeentsingiselo esizinika olu hlobo lweeTattoos.
Uyifumana phi itattoo yeentsiba
Kwicala kuyinto eqhelekileyo ukufumana itattoo yeentsiba. Ngaphezulu kwayo nayiphi na into kuba kuyilo oludibeneyo, le ndawo yindawo enkulu eyenziwe ngesavas. Ngamanye amaxesha, isetyenziselwa ukugqiba uyilo kunye nezinye umleqi maphupha Okanye, ngeentaka esikhankanye ngaphambili. Ewe kunjalo, kufuneka sitsho ukuba lilungu elibuthathaka lomzimba, kungoko lingonzakalisa ngakumbi kunakwezinye iindawo.
Olunye loyilo lufikelela esihlahleni. Ngakwindlela yokuba isongo elijikelezileyo kunye nokuphela ngentsiba encinci, okanye a uyilo oluncinci ehlala iqondile kwaye idibanisa kakuhle nalo mmandla.
Ukongeza kwindawo yesihlahla, esandleni singafumana uyilo olunjalo eminweni. Iitattoo zeentsiba zikwalungele oku, kuba kwakhona kuya kufuneka sithethe ngeyona ilula, incinci kwaye ihlala ibonwa nge-inki emnyama. Inkqubo ye- Icala elingaphandle kunye nelangaphandle lesandlaIkwayenye ilaphu elungileyo, njengoko iyindawo ende.
Indawo yegxalaba ihlala iboleka kuyilo olulungileyo. Yiyo loo nto besingafuni kuphoswa ziitatoo zeentsiba. Kulapho, apho inkuthazo iza ne iintsiba nentaka. Nangona kwezinye iimeko, indawo esezantsi yentamo ikhetha intsiba elula ebuyisela umva konke ukubalasela. Le yenye yezona ndawo zintle zokwakha iintsiba zepikoko.
Kungaba buhlungu ukusenza itattoo yonyawoEwe, kodwa uyilo losiba lolunye oludibanisa kakuhle. Zombini iintsiba zepikoko ezinombala opheleleyo, njengoyilo olunobulumko ngakumbi kwaye zikufutshane neqatha okanye, njengesongo kunye neentsiba zaseIndiya. Nguwe kuphela onelizwi lokugqibela, kuba njengoko sibona, uyilo lunokwahluka kakhulu.
Imifanekiso: Pinterest, ceknamabayi.com, etsy, archzine.es, tatuajesclub.com
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ukuzoba » Iitatoo » Intsingiselo yeeTattoo zeentsiba
Ukuphinda wenze umvambo wakho: wazi njani ukuba lixesha elifanelekileyo
Iipanda zebhere ziqokelela iitattoos: uyilo, imizekelo kunye nemibono